Mahalalà fatratra amin'ireo whompia italianina hanalavirana ny fiaraha-monina | Famoronana an-tserasera
Mety ho singa tsy fitoviana amin'ny doka ve ny tongolo? an'ny Burker King Whopper amin'izao andro izao? Mahagaga fa tsy misy fisalasalana izany, fa ny manafintohina ve ampy hanondroana ny halaviran'ny fiaraha-monina?
Efa nahita tolo-kevitra hafa izahay, toy ireo litera famantarana ireo, hanehoana halavirana sosialy ilaina mba hahafahana manohitra ny fanitarana ny COVID-19. Misy ny sasany izay misy fiatraikany betsaka noho ny hafa, saingy manontany tena izahay raha hisy vokany ny tongolo eto amin'ny firenentsika na ny hafa.
Amin'ireny faritra any Espana ireny dia omelette Espaniola misy tongolo na tsy misy tongolo no saika adihevitra nasionaly. Fantatro izany mitondra antsika lavitra an'io sary lavitra io raha entintsika any amin'ny hamburger izy io, fa iza kosa no tsy nametraka tongolo natsatsika saika may eo ambonin'ny sombin-kesika amin'ny hena hamburger tsara? (eny, somary mpihinana karnavaly ihany izahay naneho izany).
Na izany aza, Burker King Italia dia nandefa Whopper vaovao izay manana tongolo in-telo mihoatra ny mahazatra. Eny marina fa ny hevitra dia fetsy ihany, fa angamba amin'ny doka na ny famolavolana azy Tsy nanana an'io fikasihana io izy ireo mba hamokarana izany; Efa fantatrao fa afaka manana hevitra mahira-tsaina ianao, saingy tsy fantatrao ny fomba fanatanterahana izany avy eo.
Ny hevitra ao ambadiky ny tongolo dia ny hisorohana ny olona manodidina antsika, ary mahita fa sarotra amin'ny maro ny mihetsika metatra vitsivitsy miala toa ny manana andriamby rehefa mandeha mitsangatsangana na any amin'ny supermarket izahay, rehefa tongolo "maimbo". Fa hey, tsy maintsy nihinana tongolo be dia be ho an'ny mpandroba toy izany isika, angamba, tongolo lay raha olon-kafa ny vampira dia mety hisy vokany mitovy ...
El ny hevitra dia novolavolain'ny maso ivoho Wunderman Thompson ary efa notanterahina tany amin'ny trano fisakafoanana misy ny marika haingana. Raha eo akaikinao ...
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Ny hevitra feno fahendrena, na tsia, an'ny Burger King miaraka amina Whopper ho an'ny halavirana ara-tsosialy
Adobe manavao ny sary famantarana azy sy ny mombamomba azy
Ny torolàlana LEGO "mahafinaritra" mankany amin'ny fiasana an-trano izay hahafaly anao